Ogaden News Agency (ONA) – Isbahaysiga Al-Sadr oo Ku Guulaystay Doorashadii Ciraaq.
Isbahaysiga Al-Sadr oo Ku Guulaystay Doorashadii Ciraaq.
Posted by ONA Admin	/ May 16, 2018
Isbaheysiga uu hogaamiyo wadaadka shiicada ah ee sida aadka ah uga soo horjeeda Mareykanka kaasi oo lagu magacaabo Muqtada al-Sadr ayaa ku guuleystay doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalka Iraq.
Iyadoo inta badan la tiriyay codadka la dhiibtay, ayuu Isbaheysiga Al-Sadr uu hogaaminayaa ilaa iyo lix Gobol. Waxaa kusoo xiga xisbiga uu madaxda u yahay Hadi al-Amiri oo madax u ah koox maleeshiyo ah. Ra’isulwasaare Haider al-Abadi, oo ay taageerto dowladda Mareykanka ayaa ka codsaday dadka reer Ciraaq in ay ixtiraamaan natiijada kama danbeysta ah ee kasoo baxda doorashada.
Boqolaal ka mid ah taageerayaasha Muqtada Al-Sadr ayaa isugu soo baxay magaalada Baghdad kadib marki lagu dhawaaqay qeyb ka mid ah natiijada. Qaar ka mid ah dadka ayaa ku qeylinayay bog cusub ayaa u furmay dadka Ciraaq, halka kuwo kalana ay dhahayeen waa dhamaadkii musuqmaasuq.
Al-Sadr ayaanan u ordin kursiga baarlamaanka mana noqon karo Ra’isulwasaare, laakin maadaama uu yahay gudoomiyaha isibaheysiga doorashada ku guuleystay, waxa uu door weyn ka ciyaari doonaa jaan-goynta siyaasadda Ciraaq iyo soo dhisidda dowlada soo socota.